Daawo:- wasiir K/xigeenka Arrimaha Dibada Maamulka Khaatumo Safia Cali Caateye Oo Dadal U Gashay Kenida Diyarada Dawada
Caafimaadka Ciyaaraha Jaaliyadda ssc Khatumo2 Muqaalo Wararka Youtube April 14, 2017
London(Allssc): Wasiir K/xigeenka Arrimaha Dibada Maamulka Khaatumo State Safia Cali Caateeye ayaa dadaal dheer u gashay iyada oo kaa shanaysa Maamulka Khaatumo helista Xuquuqda Dowlada Federalka iyo Hay’adaha Deeqaha Bixiya uga maqan Deegaanka Khaatumo.
Safia Cali Caateeye ayaa toos ula hadashay Hay’ada Cafimaadka W.H.O. Dowlada Federalka Somalia, Dowlada Dalka UK. ICRC iyo Dowlado iyo Hay’ado badan kwuaas oo ay ku boorisay waxa sababay in deganka khatumo ay heli waydo ama ay tagi waayeen Hay’adaha ku shaqada leh wax ka qabadka xaladaha deganka khaatumo ka jira. Taas oo ugu danbayntii Ay wasiiradu ku guulaysatay.
Hadaba maxay tahay sababta aan qoraalkan ugu cadaynaynaa in Wasirad safia iyo Mamulka Khaatumo ay dadal badan u galeen helista waxa ay xaqa ugu leeyihiin Dowlada Federalka Somalia iyo U.N ka.
Sababaha Qoraalkan ayaa imanaya kadib markii Kooxdo Budhlay ah oo diyarada dhinaca soo qabsaday ay isku sawireen Deeqdan Dawada ah kwuaas oo shegtay in ay qayb ka yihin Dadaalka balse la ogson yahay in ay toos ula shaqeeyaan Maamul Beeledka Garoowe kuwaas oo hore qayb uga ahaa in dawadan iyo Deeqo kale dib u dhaca loogu sameeyo.
Iskusoo wada duuboo waxaa maanta Garowoe Geeri u ah in Shacabka Reer Khaatumo ay Dowlada Federalka ka helan Xuquuqda ay ku leyihin sidoo kalana toos u helaan Deqaha Besha Calamka hore loogu isbaraysan jiray Garoowe Iyo Hargaysa.
Tagged deeq dawo oo gaadhay buuhoodlediyaarad sida dawo oo ka dagtay buuhoodlefeaturedkhatumonewssafia ateyesafia cali caateeyewararkawararka khaatumowararkii ugu danbeeyay khaatumo statewasiir K/xigeenka arrimaha dibada khaatumo state safia cali cateye